कलेजोमा समस्या देखिएको कसरी थाहा... :: डा. राहुल पाठक :: Setopati
डा. राहुल पाठक कलेजो रोग विशेषज्ञ
कलेजोको समस्याहरू धेरै छन्। कलेजो बिग्रनुका कारणहरू पनि धेरै छन्। सामान्यत: हाम्रो खानपानको शैलीले गर्दा कलेजो बढी बिग्रिन्छ। रक्सीको प्रयोग,भाइरल इन्फेक्सन,हेपटाइटिस बी र हेपटाइटिस सीले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा कलेजोको समस्या देखिन्छ।
खानपानले गर्दा नै हेपटाइटिस ए र इका समस्याहरू देखिन्छ। तर यी समस्या छोटो समयका लागि हो। कलेजोलाई आराम गराएर जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्न सके यसमा सुधार आउँछ। कलेजोमा दीर्घकालीन समस्या भनेको 'फ्याटी लिभर'हो। यसमा धेरै अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। ओपिडीको धेरै बिरामीहरू फ्याटी लिबरले चिन्तित भएर आउने गर्छन्। यसको मुख्य कारण जंक फुड नै हो। अलिकति डाइभिटिज भएका बिरामीलाई यसले धेरै सताउने गर्छ भने कहिलेकाहीँ औषधि खाएर पनि फ्याटी लिबर हुने गरेको छ।
'फ्याटी लिभर'का दुई कारण छन्।
कलेजो रक्सीको प्रयोगले नै बढी बिग्रिन्छ। हामीकहाँ रक्सीले गर्दा कलेजो बिग्रिन्छ भन्ने चलन छ जुन सत्य पनि हो। तर रक्सीले मात्रै कलेजो बिग्रिन्छ भन्ने होइन,रक्सी नखानेको पनि कलेजो बिग्रिन सक्छ।
मोटोपन बढी हुनु र डाइभिटिज 'फ्याटी लिभर'को मुख्य कारण हो। जसको शरीरको तौल नियन्त्रण छैन जसको मधुमेह नियन्त्रण छैन,उनीहरूमा 'फ्याटी लिभर' देखिने गरेको छ।
यो एउटा 'साइलेन्ट' रोग हो। फ्याटी लिभर भएको मान्छेले यसलाई यदि हल्का लियो भने दीर्घकालमा यसले कलेजोलाई बिगार्दै जान्छ। त्यसैले 'फ्याटी लिभर' देखिएपछि चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिएर उपचार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। 'फ्याटी लिभर' भनेको कलेजोमा बोसोको मात्रा बढ्दै जानु हो।
यसको सुरूको उपचार प्रक्रिया साधारण छ। त्यसमा कलेजोको काम गरिरहेको अवस्थाबारे परीक्षण गर्न सक्छौं। त्यसमा इन्जाम बढेको हुन सक्छ भने कसै कसैको बिलुरुबिन पनि बढेको हुनसक्छ। कसैलाई अल्ट्रा साउण्ड गराउँदा पनि 'फ्याटी लिभर'को समस्या देखिन्छ।
त्यसमा पनि ग्रेडिङ हेर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा अन्य अनुसन्धान गरेर मापन गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा उपचार गर्न सहज हुन्छ।
कतिपय अवस्थामा मान्छेले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गराएर खानपानमा नियन्त्रण गरेर आफ्नो कलेजो जोगाउन सक्छन्।
कलेजोमा समस्या देखिएको कसरी थाहा पाउने?
यो साधरणतया साइलेन्ट रोग हो। सुरूमा रोगको लक्ष्यण देखिन्छ भन्ने छैन। कतिपय मान्छेहरूलाई यसबारे थाहा हुँदैन।
साधारणतया यदि कसैलाई लिभरको समस्या भयो भने पेटको माथिल्लो भागमा अलिकति दुख्ने समस्या हुन सक्छ। आलस्य लाग्ने खानामा रुचि नलाग्ने समस्या आउन सक्छ। यो अलिकति बढ्यो भने जन्डिसको परीक्षण गर्नुपर्छ। पेटको दुखाइ बढ्न सक्छ। सुरूमा यसको कुनै लक्षण हुँदैन। पछि साधारण दुखाइ हुन सक्छ। पछि एकैचोटि बिरामी समस्या जटिल भएपछि मात्रै आएका हुन्छन्।
कलेजोमा समस्या छ कि भनेर शंका गर्नु सबभन्दा राम्रो हो। जंक फुड बढी प्रयोग गर्नेहरूले शंका गरिहाल्नुपर्छ। यदि हाम्रो उचाइ अनुसारको तौल बढी छ भने पनि शंका गरिहाल्नु राम्रो हो। जीवनशैली राम्रो,उचाइ अनुसारको तौल छ भने आत्तिनु पर्दैन। खानामा अनुशासन र नियमित व्यायम नै कलेजो स्वस्थ राख्ने राम्रो उपाय हो। तर कुनै शंका छ, समस्या देखियो भने अल्ट्रा साउण्ड र कलेजोको काम गर्ने प्रक्रियाको परीक्षण गरेको राम्रो हो।
खानपिन मिलेको छैन रक्सी सेवन बढी छ र तौलमा नियन्त्रण छैन भने उहाँहरूले यो परीक्षण नियमित गराइराख्नुपर्छ।
कलेजो रोग लाग्नै नदिन के गर्ने?
लिभर हाम्रो मुख्य अंग हो। यदि खानपिन राम्रो छ भने र सामान्य व्यायम नियमित रूपमा गरिराख्नुभएको छ भने यो एउटा राम्रो उपाय हो।
यसमा तपाईंले स्वस्थ जीवनयापन व्यतित गरिराख्नुभएको छ भने यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय हो। उमेर अनुसार परीक्षण गरिरहनु सबभन्दा राम्रो हो।
नेपालमा यसको उपचार
नेपालमा सामान्यदेखि जटिल खालका उपचार हुन थालेका छन्। नेपालमा कलेजको प्रत्यारोपण सुरू भइसकेको छ। धेरै चिकित्सकहरूले यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेर काठमाडौंभित्र र बाहिर उपचार गर्न थालिसकेका छन्।
रोगको पहिचान समयमा भयो भने राम्रो हुन्छ। अहिले पनि धेरैलाई ढिलो थाहा हुन्छ। बेलैमा थाहा भयो भने बिरामी र चिकित्सक दुवैलाई सहज हुन्छ।
हेपटाइटिस बि र हेपटाइटिस सी, अहिले पनि आकस्मिक रूपमा मात्रै थाहा हुने गरेको छ।
यदि समयमै परीक्षण गर्ने हो भने सहज हुन्छ। विदेश जानुभन्दा अघि हेपटाइटिस बी र सीको परीक्षण गरिने भएकाले सो समस्याबारे थाहा हुन थालेको छ। यद्यपी विदेश जान नपर्नेहरूले भने निकै कम मात्रमा यसको परीक्षण गर्ने गरेका छन्। हेपटाइटिस बी र सी देखिएका कतिपयलाई उपचार गर्न सकिन्छ कतिलाई उपचार पनि चाहिँदैन। कलेजोमा देखिने धेरै समस्याको उपचार नेपालमै संभव छ।
(कलेजो रोग विशेषज्ञ उपप्रध्यापक डा. पाठक त्रिवि शिक्षण अस्पताल र ओम अस्पतालमा कार्यरत छन्।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६, ०७:३६:००